Wasiirka Arimaha Dibada ee Dalka Ereteriya oo soo gaaray magaalada Hargeysa ee Soomaliland – Walaal24 Newss
Wefdi ballaadhan oo ka socda dalka Ereteriya oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda dalka Ereteriya, Mudane Cismaan Saalax Maxamed, ayaa maanta soo gaadhay caasimadda maamulka Somaliland ee magaalada Hargeysa.
Ugu horrayn waxa wefdiga gegida caalamiga ah ee Cigaal International Airport kusoo dhaweeyey madaxweyne-ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) iyo wasiirrada arrimaha dibadda iyo horumarinta maaliyadda Somaliland, Prof. Yaasiin Maxamuud Xiir (Fara-toon) iyo Sacad Cali Shire, waxayna ay usoo gelbiyeen dhinaca qasriga madaxtooyada, halkaas oo si diirran uu ugu qaabilay madaxweynaha maamulka Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi.
Madaweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa kulan gaar ah la qaatay wefdiga ka socda dalka Eriteriya ee uu horkacayo wasiirka arrimaha dibadda dalka Eriteriya, Mudane Cismaan Saalax Maxamed, waxana uu kulankaas oo is xogwaraysi ahaa uu qaatay muddo saacado ah.
Wasiirrada arrimaha dibadda ee maamulka Somaliland iyo Dalka Eriteriya, ayaa markii kulankaasi dhammaaday warbaahinta la hadlay, waxayna ka hadleen ujeeddada wefdiga ka socda dalka Eriteriya u yimaadeen iyo waxyaabihii ay madaxweynaha iyo wefdigu ka wada hadleen.
Ugu horrayn wasiirka arrimaha dibadda dalka Eriteria, Mudane Cismaan Saalax Maxamed, ayaa sheegay in la gaadhay waqtigii qiimayn lagu samayn lahaa xaaladda dalka Somaliland, islamarkaana ay madaxweynahoodii ku celin doonaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta Somaliland, waxana isaga oo arrimahaas ka hadlaya uu yidhi, waana sida ay hadalka u dhigeen maamulka Soomaliland.
Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xidhiidhka caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Somaliland, Prof. Yaasiin Maxamuud Xiir (Faro-toon), ayaa isaguna dhankiisa xusay in madaxweynaha iyo weftiga ay kulankooda diiradda ku saareen sidii ay dalalka geesku isu kaashan lahaayeen, islamarkaana loo wadaagi lahaa afkaarta, waxana isaga oo arrimahaas ka hadlaya uu yidhi.
“Weftigu waxa ay u yimaaddeen inay is-kaashiga iyo xidhiidhka dalalka geeska Afrika, gaar ahaan labada dal ee Somaliland iyo Eriteriya ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan iyo sidii arrimahaas looga wada hadli lahaa ee ra’yi iyo afkaar la iskaga dhaafsan lahaa, si wanaagsanna waannu u wada hadalnay.”
Hogamaiyaasha Somaliland iyo Puntaland ay diiday iney kala qaadan Ciidamada ku sugan Gobolka Sool
Ra’iisul Wasaare Khayre oo shir guddoomiyay Amniga magaalada Dhuusamareeb
Amniga magaalada Kismaayo ee maamulka Jubaland oo lagu wareejiyay Ciidamo Booliis ah
R/wasaare Khayre oo tababar u xiray Ciidamo loo diyaariyay qorshaha sugidda Amniga Caasimadda
Daawo: Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatay xubno ka tirsan iskood isu xilqaamay howlaha Gurmadka Fatahaadaha
Daawo: Taliyaha Hoganka Canshuraha Bariga iyo iyo Taliye ku xigenka Hoganka Canshuuraha oo ka hadleen shaqsiyad Dekadda ka shaqaynayay oo loo xiray eedaymo boob Hanti Dadwayne